Pesta ao Toamasina : mitavozavoza ny mpiasan’ny fahasalamana | NewsMada
Pesta ao Toamasina : mitavozavoza ny mpiasan’ny fahasalamana
Par Taratra sur 16/09/2017
Tsy mahatoky ny mpiasan’ny fahasalamana ny ao Toamasina amin’ny fitavozavozana asehony manoloana ny aretina pesta mihana ankehitriny.
Tsy maharesy lahatra ny vahoaka ny filazan’ny tompon’andraikitra fa efa voafehy ny valanaretina pesta ao Toamasina. Ho an’ny tompona sekoly nakatona noho ny tahotry ny mety ho fihanaky ny aretina pesta, nambarany fa fitavozavozan’ny mpiasan’ny fahasalamana no nahatonga ny fihanaky ny aretina.
Raha misy olona maty, tokony hanao fitiliana hatrany ny mpiasan’ny fahasalamana mba hahafantarana ny anton’ny fahafatesana. Ny 28 aogositra nisy maty tao Moramanga ka aty amin’ny faha-12 septambra vao mikoropaka fa hay o nahafaty ilay olona ny pesta.
Efa maro ny olona nivezivezy sy nikirakira iny razana iny. Tsy nisy ny fiarovana natao tamin’ny fiarakodia na fiaramanidina mifamezivezy nitondrana ilay mpianatra nankany Vohemar nandalo tao Sambava.
Ny tena loza, tsy nampahafatarina ny mpiasan’ny fiantsonan’ny fiaramanidina tao
Ambalamanasy fa olona matin’ny pesta iny nalefa iny. Omaly vao novoriana ny mpiasa niresahana ny tokony hatao, raha ny filazan’ity renim-pianakavinaa tompona sekoly voatery nakatona tampoka ity.
Mpiasa iray eo anivon’ny fiantsonan’ny fiaramanidina Ambalamanasa nanaovana fanadihadiana kosa nanambara fa anatin’ny tahotra tampoka ireo mpiasa raha vao nahare taty aoriana fa olona matin’ny pesta ilay razana nalefa tao.
Olona telo matin’ny pesta ao vakinankaratra
Matin’ny aretina pest any olona telo ao Vakinankaratra ary olona efatra hafa nahazo ny fitsaboana sahaza azy tany Faratsiho. Voaresaka izany tao anatin’ny lahadinika nifampizarana teo anivon’ny fivoriambe fanao isam-bolana eo anivon’ny prefektoran’Antsirabe sy ny faritra Vakinankaratra.
Anisan’ny miteraka resabe ao Antsirabe ny aretina pesta. Amin’ny ankapobeny, madio ny ao an-tampon-tanàna. Misy ihany ireo olona mividy fanafody Cotrim, saingy tsy mbola betsaka.
Nentanina amin’ny fahadiovana sy ny famonoana voalavo kosa ny any amin’ny kaominina ambanivohitra ao anatin’ny faritra Vakinankaratra.
Tokony hanatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana na hampandre hainganany manam-pahefana haingana ireo izay mahita trangan’aretina hafahafa, raha ny tatitry ny fivorian’ny prefektoran’Antsirabe hatrany.
Sajo sy Tatiana A